चुपचाप किन्नुहोस यी ५ चीज, हुदैन धनको कमि!:: Naya Nepal
धनतेरसको दिन सामानहरु किन्ने र दीपदान गर्ने दिन अर्थात् धनतेरस पर्व साथै काग तिहार पनि हो । यस दिन विभिन्न वस्तु घरमा भित्र्याउनाले वर्षभर धनको कमि नहुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। जानेर बुझेर खरिद गरे देखि लक्ष्मीले कहिले साथ नछोड्ने विश्वास पनि रहेको छ । ज्योतिष शास्त्रीहरुका अनुसार धनतेरसमा निम्न उल्लेखित वस्तुहरु कसैलाई थाहा नदिइ घरमा भित्राउदा आर्थिक लाभ हुने गर्छ।
read more news more topic
कुकुर पाल्नुस्, मुटुरोग र मधुमेहबाट बच्नुस्”
काठमाडौँ, यमपञ्चकको तेस्रो दिन शनिबार इमान्दारीपूर्वक घरको सुरक्षामा खटिने कुकुरलाई मीठो खानेकुरा खान दिएर कुकुर तिहार मनाइँदै छ ।
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरी मीठो खान दिए यमलोकको यात्रा गर्दा यमराजको पहरेदारका रुपमा मूलढोकामा बस्ने ‘श्याम’ र ‘सबल’ नामका कुकुरले सहजरुपमा बाटो छाडिदिने धार्मिक विश्वास छ
more again more
रोनाल्डो बिक्रिमा !
इटालियन महारथी युभेन्टसले सिजनको अन्त्यमा आफ्नो स्टार खेलाडी क्रिस्तियानो रोनाल्डोलाई बेच्ने योजना बनाएको छ। एएसको एक रिपोर्टका अनुसार। युभेन्टसले क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई आउने समर ट्रान्सफर विन्डोमा बजारमा राख्ने योजना गरिरहेको छ।
२००९ मा म्यानचेस्टर यूनाइटेडबाट रियल म्याड्रिड आएका रोनाल्डो स्पेनिस क्लबमा ९ वर्ष बिताएपछि २०१८ मा ११७ मिलियन डलरमा युभेन्टससँग अनुवन्ध भएका थिए। उनी इटालियन महारथीसँग २०२२ सम्म अनुवन्धित छन्। युभेन्टस अहिले रोनाल्डोको वर्तमान सम्झौताको समयावधि समाप्त हुनुभन्दा अघि बेचेर आफूले लगानी गरेको ११७ मिलियन डलरको ठूलो हिस्सा उठाउने दाउमा रहेको छ।